အရံဟင်းတမယ်လို့ ဆိုပေမဲ့ ဒီဟင်းတမျိုးထဲနဲ့တောင် စားလို့မိန်စေတဲ့အတွက် ဒီနေ့တော့ ထိုင်းရိုးရာ အစာတခုကို အခြေခံပြီး မျှစ်ထောင်းပူစပ်စပ် ထောင်းနည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ပြုပ်ပြီးသား မျှစ်ချိုနု - အသေး 400g
ခရမ်းကြွတ်သီး - ၂လုံး( ရှိလျှင်ထည့်ပါ)
ပုစွန်ခြောက် - ထမင်းစားဇွန်း ၁ဇွန်း
ထန်းလျက် - အသေး တခဲ
ပုဇွန်ငါးပိ - ထမင်းစားဇွန်း တဇွန်း
ချယ်ရီခရမ်းချဉ်သီးကို ထက်ခြမ်း လှီးထားပါ
ပဲတောင့်ရှည်ကိုလဲ လက်တဆစ်ခန့် လှီးထားပါ
ခရမ်းကြွတ်သီးကိုလဲ ခပ်ပါးပါး လှီးထားပါ
ပုဇွန်ငါးပိကို မိုက်ခရိုဝေ့ထဲမှာ တမိနစ်လောက်ထည့်ပြီး မွှေးလာအောင် ကင်ပေးပါ
ပြီးတာနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူနှင့် ငရုတ်သီးစိမ်းကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း လုံးခြမ်းကွဲရအောင်ထောင်းပေးပါ
အားလုံးအဆင်သင့် ဖြစ်တာနဲ့ ငရုတ်ဆုံထဲမှာ လေးစိတ်ကွဲ လှီးထားသော မျှစ်များ ပင်စိမ်းရွက် လှီးထားသော ပဲသီး ခရမ်းကြွတ်သီးနှင့် ခရမ်းချဉ်သီးတို့ကို ခပ်ဖွဖွထောင်းပေးပါ
ခပ်ဖွဖွထောင်းပြီးတာနဲ့ ပူပြီးစပ်ကာ မွှေးနေတဲ့ မျှစ်ထောင်းကို နှစ်သက်သလို စားသုံးနိူင်ပါပြီ
Labels: ထိုင်းစတိုင်လ် စားဖွယ်ရာများ, မျှစ် စားဖွယ်ရာများ
ကောက်ညှင်းမှုန့်. - ထမင်းပေါင်းအိုး ဆန်ချင်ဗူး ၄ဗူး
ကောက်ညှင်းမှုန့်ကို ရေထမင်းပေါင်းအိုး ဆန်ချင်ဗူး ၃ဗူးနှင့် နည်းနည်းချင်းထည့်ကာ နယ်ပေးပါ
ကောက်ညှင်းမှုန့်အပေါ်မူတည်ပြီး ရေကို နည်းနည်းချင်းထည့်ပြီး နယ်ပေးပါ
မုန့်သားပျော့ပြီး စေးလာပြီဆိုရင် မုန့်သားအရမ်းမပျော့စေရန် ရေကိုအကုန်မထည့်ဘဲ ချန်ထားလိုက်ပါ
မုန့်သားပျော့လာပါက လေလုံသော ဗူးတခုထဲထည့်ကာ အဖုံးဖုံးထားပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ တညသိပ် ထားပေးပါ
မုန့်သား တညသိပ်ထားပြီးတာနဲ့ ကျိုထားသော ထန်းလျှက်ရည်နှင့် နှမ်းတို့ထည့်ပြီးနယ်ပေးပါ
မုန့်သားပြန်စပ်ပြီးတာနဲ့ လက်တဖျစ်စာသာသာ အနေတော်မုန့်သားကိုယူကာ လက်ဖ၀ါး နှစ်ဖက်နဲ့ ပွတ်ပြီး မုန့်သားရှည်ရှည်လေးရတာနဲ့ ထိပ်စ၂ဖက်ကို အ၀ိုင်းလေးလုပ်ကာ ဖိပြီးဆက်လိုက်ပါ
မီးအနေတော်နဲ့ကြော်နေစဉ် တဖက်ကျက်ရင် တဖက်ကို လှန်ပေးပါ
၂ဖက်လုံး မုန့်သားအရောင် ပြောင်းသွားပြီး ကျွတ်လာပါက ဆယ်ပြီး ဆီစစ်ဇကာထဲထည့်ကာ ဆီစစ်ပေးပါ
ထိုနည်းအတိုင်း မုန့်သားအားလုံးကုန်အောင် ကြော်ပေးပါ
ကြော်ထားသော မုန့်လက်ကောက်များ အေးလာပါက ဆီကို မီးအနည်းငယ် ထပ်လျော့ကာ မုန့်လက်ကောက်များကို တခုခြင်းစီ အိုးဆန့်သလောက် ထပ်ကြော်ပေးပါ
မာပြီးကြွတ်လာတဲ့အထိ စိတ်ရှည်ရှည် ကြော်ပေးပြီး ဆယ်ကာဆီပြန်ပြီး စစ်ပေးထားပါ
မွှေနေစဉ် ထန်းလျှက်ရည် ကြွက်မှီးတန်း အနေအထား ရမရသိစေရန် ထန်းလျှက်ရည်ကို သစ်သားယောင်းမနှင့် ဆယ်ပြီး အိုးထဲမှာဘဲ ပြန်လောင်းချကြည့်ပါ
ကြွက်မှီးတန်း အနေအထားလောက်ရရင် အအေးခံပြီး မုန့်သားအရောင်လှစေရန် မုန့်သားစပ်တဲ့အထဲကို ထည့်ပေးနိူင်သလို မုန့်လက်ကောက်နှင့် စားလို့ရပါပြီ။
အခုရက်ထဲ ရာသီဥတုက အေးလေတော့ ပူပူစပ်စပ်လေးတွေ လုပ်စားဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့တော့ စားနေရင်းကို ခြွေးဒီးဒီးကျစေပြီး စားလေစားလေ ဇွန်းကိုလက်က မချချင်လေအောင် ဆွဲဆောင်စေပြီး ငတ်မပြေစေတဲ့ ထိုင်းစတိုလ် သခွားသီးသုပ် ချို ချဉ် ငံ စပ် လေး သုပ်စားဖြစ်လို့ သုပ်နည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
သခွားသီး - ၂ လုံး
ကြက်သွန်နီ - အလုံးသေး: ၃လုံး (Onion Shallot French )
ပဲတောင့်ရှည်များကို ရေဆေးပြီး တလက်မလောက် အနေတော် လှီးထားပါ
ငရုတ်ဆုံထဲမှာ ပုဇွန်ခြောက်ကို မညက်တညက် ထောင်းပေးပါ
ငရုတ်သီးစိမ်းကိုလဲ ရေဆေးကာ အညှာခြွေပြီး မညက်တညက် ထည့်ထောင်းပေးပါ
မြေဲ ပဲတောင့်ရှည်နှင့် ချယ်ရီခရမ်းချဉ်သီးလေးတွေကိုထည့်ပြီး လေး ငါးချက်လောက် ခပ်ဖွဖွ ထောင်းပေးပါ
အားလုံး သမသွားပြီဆိုတော့မှ လှီးထားသော ကြက်သွန်နီ အအေးခံထားသော သခွားသီးနှင့် သံပုရာရည်ညှစ်ပြီး အခွံပါထည့်ကာ ခပ်ဖွဖွလေး ထောင်းပြီးမွှေပေးပါ
ထိုင်းသင်္ဘောသီးထောင် မျှစ်ထောင်း သခွားသီးထောင်း အစရှိတဲ့ ထောင်းနည်းတွေဟာ ငရုတ်ကျည်ပွေ့နဲ့ အရမ်း ခပ်ပြင်းပြင်း ထောင်းခြင်းမဟုတ်ဘဲ ခပ်ဖွဖွလေးထောင်းကာ အရသာ သမသွားအောင် ထောင်းနည်းလေးတွေ ဖြစ်တာမို့လို့ ခပ်ဖွဖွဘဲ ထောင်းစေချင်ပါတယ်
ချို ချဉ် ငံ စပ်ပြီး မွှေးနေတဲ့ သခွားသီးထောင်းကိုထောင်းလို့ထွက်လာသော အရည်များပါ ပန်းကန်တခုထဲ ပြောင်းထည့်ပေးပြီး နှစ်သက်ပါက ( မြေပဲလှော်ဖြူးကာ) သုံးဆောင်ရန် ပြင်ပေးပါ။
Labels: ထိုင်းစတိုင်လ် စားဖွယ်ရာများ, သခွားသီး စားဖွယ်ရာများ
ဘာဆာငါးအသားလွှာ - 500g
အချိုမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တဇွန်းသာသာ
ဘာဆာငါး ငါးအသားလွှာပြီးသားကို ရေဆေးပြီးရေစစ်၍ ကြော်နေစဉ် ကျေမသွားစေရန် သင့်တော်သလို ခပ်ထူထူလှီးပေးပါ
ဆီပူလာတာနဲ့ အရသာနယ်ထားသောငါးကို တတုံးခြင်းထည့်ပြီး ကြော်ပေးပါ
ပဲနို့တွေ ၀ယ်သောက်တိုင်း ဈေးကြီးလေတော့ အိမ်မှာကိုယ်တိုင် ကျိုသောက်ဖို့ ပြင်ဆင်ရ ပြန်ပါတယ် ပြင်ဆင်နည်း အဆင့်လေးတွေ များသလို ကျိုရတာလဲ စိတ်တော့ ရှည်ဖို့လိုပါတယ် အဲဒီလိုပါဘဲ ကျိုပြီးပြန်တော့ အိုးတွေပန်းကန်တွေ ဆေးရတာ အတော်လေးတော့ အလုပ်ရှုတ်သားလို့ ပြောရမှာပါ။
နောက်ဆုံး ပြန်တွက်ကြည့်လိုက်တော့ ရေမီတာ မီးမီတာဖိုး အရမ်းဈေးကြီးတဲ့ နိူင်ငံမှာ ကျိုရတဲ့ မီးဖိုးရယ် ဆေးရကြောရတဲ့ ရေဖိုးရယ် ပြန်တွက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ အဆင်သင့် ၀ယ်သောက်ရတာက ပိုပြီးတန်ပါတယ် ဒါပေမဲ့လဲ သန့်သန့်ပြန့်ပြန့် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် သောက်ချင်သူတွေအတွက် ပြင်ဆင်ပုံလေးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ဗလင်ဒါထဲကို ရေ၀နေသောပဲ တ၀က်ခွဲပြီး ရေ 300ml နှင့်ရောထည့်ကာ တမိနစ်ကြိတ် တခါနားပြီး ၁၀မိနစ်လောက် ကြိတ်ပေးပါ
ကျန်နေသောပဲကိုလဲ ထိုနည်းအတိုင်း ကြိတ်ပေးပါ အားလုံးကြိတ်ပြီးတာနဲ့ ရေ 200ml လောက်ထည့်ကာ ဗလင်ထဲက ပဲအနှစ်များကိုဆေးပြီး ကြိတ်ထားသော ပဲအနှစ်များထဲမှာ ရောထည့်ပေးပါ
ခပ်ပျစ်ပျစ် နှစ်သက်သက်ပါက ပဲနို့ကို 600ml လောက်ရတဲ့အထိ ကျိုပေးပါ
ပိုနေသော ပဲဖတ်ကို တချို့ကတော့ ဗယာကြော်လို ကြော်စားကြပါတယ် ဒါပေမဲ့ ဆီအရမ်းစုတ်ပြီး အရသာကုန်နေသော ပဲဖတ်များ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကြော်စားလို့ အရသာမကောင်းပါ လွှင့်ပြစ်လိုက်တာသာ အကောင်းဆုံးပါလို့ အကြံပေးပါရစေ။
ပုစွန်ခြောက် - ထမင်းစားဇွန်း ၃ဇွန်း
ဇီးဖြူသီးများကို ရေစင်အောင်ဆေးပြီး ငရုတ်ဆုံထဲမှာ လုံးခြမ်းကွဲ အနေအထားရအောင် ထောင်းပေးပါ
ထောင်းနေစဉ် ထွက်လာသော အစေ့များကို ဖယ်ပေးပါ
လုံးခြမ်းကွဲ အနေအထား ရနေသော ဇီးဖြူသီးများကို ခပ်နုတ်နုတ် အနေအထားရအောင် ထောင်းပေးပြီး ဆား ထမင်းစားဇွန်း တဇွန်းနှင့်နယ်ကာ အဖန်ရည်များ ထွက်သွားအောင် အရည်များကို ညှစ်ပေးထားပါ
ပုဇွန်ငါးပိကို မိုက်ခရိုဝေ့ မီးဖိုထဲထည့်ပြီး တမိနစ်လောက် ကင်ပေးပါ သို့မဟုတ် ဇွန်းခွက်မှာ ကပ်ပြီး မီးဖိုမှာ မွှေးလာအောင် ကင်ပေးပါ
ကြက်သွန်ဖြူ ငရုတ်သီးစိမ်းနှင့် ပုဇွန်ခြောက်တို့ကို မွှေးလာအောင် ၂မိနစ်လောက် လှော်ပေးပါ
အတော်လေး ညက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ ပဲဆီမွှေးမွှေးလေး ဆမ်းပေးကာ ဇီးဖြူသီးထောင်းကို နှစ်သက်သလို စားသုံးနိူင်ပါပြီ။
ထိုင်းရိုးရာစစ်စစ် ချို ချဉ် ငံ စပ် ဆော့စ် အနှစ်ဆမ်း ငါးကြော်နည်းကို အခြေခံပြီး ကြော်ထားတာဖြစ်လို့ ပြင်ဆင် ချက်ပြုပ်ပုံ အနည်းငယ် ကွားခြားနိူင်ပါတယ် အမှန်တကယ် ထည့်ရမဲ့ ပစ္စည်းတွေထဲမှာလဲ နံနံပင်အမြှစ် မရလေတော့ နံနံပင်အမြှစ်အစား နံနံပင်အရိုးကို ထည့်ထားပြီး ပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်။
ကြက်သွန်နီ - ခပ်ကြီးကြီး တလုံး
စေးကပ်ကပ်လေး ဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့ ကြော်ထားသောငါးအပေါ်သို့ လောင်းချကာ နံနံပင်အုပ်ပေးပြီးပါက ချို ချဉ် ငံ စပ် ဆော့အရည်လောင်းထားသော ငါးအကြွတ်ကြော်ကို မိန်ယှက်စွာ စားသုံးနိူင်ရန် ပြင်ပေးနိူင်ပါပြီ။.
Labels: ငါးမျိုးစုံ စားဖွယ်ရာများ, ထိုင်းစတိုင်လ် စားဖွယ်ရာများ